Thwebula OpenVPN 2.5 – Windows – Vessoft
WindowsInethiwekhiI-VPN & UmmeleliOpenVPN
Isigaba: I-VPN & Ummeleli
Ikhasi elisemthethweni: OpenVPN
OpenVPN – isofthiwe enamandla ukusebenza nge virtual amanethiwekhi ezizimele. OpenVPN ikuvumela ukuba usebenzise futhi ngezifiso inethiwekhi virtual okusekelwe uxhumano amaphuzu Wi-Fi noma ADSL-modems. Isofthiwe kwenza ukwakha iziteshi ngekhodi ukuxhuma kwiseva noma komunye yokungena ukuba omunye ngokululaza kuze router noma modem. OpenVPN iqukethe amathuluzi amaningi ukulungisa ukufinyelela othomathikhi zokuxhumana ezifana SSL noma VPN. Futhi isofthiwe isebenzisa ubuchwepheshe ekhethekile ukunikeza ukuvikelwa esiphezulu emfudlaneni channel kanye nedatha main.
Kwakha iziteshi ezahlukene zombhalo
Inqubo Automatic of zokuxhumana
Ukusetshenziswa umtapo OpenSSL
Ngcono ukukhiqiza ukubethela
Amazwana ku OpenVPN
OpenVPN software ehlobene
Isofthiwe ukuxhuma kwiseva noma ikhompuyutha ngokusebenzisa yezifiso ezahlukene. Futhi in the software kunezifiso Tinsita ukukhiqiza ssh okhiye ubuqiniso.
IHotspot Shield – isoftware yokuxhuma okuvikelwe nezikhathi zewebhu ezivikelekile ku-inthanethi. Ukuba yimfihlo kwanoma iyiphi imisebenzi eku-inthanethi kutholakala ngokushintshwa kwekheli le-IP lomsebenzisi.
I-Freegate – ithuluzi elinikeza ukufinyelela kumasayithi avinjelwe. Isoftware inika amandla ukudlula ebhulokini lokucwaninga ukudala ukuxhumana ngeziphakeli zommeleli eziyimfihlo.
I-doPDF – isoftware eguqula umbhalo namafayela wesithombe abe yifomethi ye-PDF ngokusebenzisa iphrinta ebonakalayo eyenziwe ngokuzimela.
Lesi isofthiwe esikusiza ukuba ufake ngokushesha umbhalo kanye nemishwana ethile ngaphandle kwamaphutha ezinhlelo zokusebenza ezahlukene ngenxa yohlu olwenziwe ngaphambilini lwenhlanganisela ebalulekile.